विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३८ लाख ७५ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ? Canada Nepal
भारतमा एकैदिन ४१ हजार कोरोना संक्रमित थपिए, ३७ हजार निको
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ५ सय ९८ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै हालसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ लाख २३ हजार ८४२ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ४१ हजार ४९९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ३ करोड १६ लाख १२ हजार ७९४ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ३७ हजार ३ सय १४ कोरोना संक्रमित निको भएका छन् । यससँगै हालसम्म ३ करोड ७ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
श्रावण १६, २०७८ शनिवार ०७:२७:४४ बजे : प्रकाशित
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १९ करोड ८० लाख नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १९ करोड ८० लाख ३१ हजार ३ सय ३६ पुगेको छ भने यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४२ लाख २४ हजार ३ सय ४६ पुगेको छ ।
त्यस्तै हालसम्म विश्वभर १७ करोड ८९ लाख २५ हजार ४ सय ६७ कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भइसकेका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट ६ लाख २९ हजार ६४ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ३ करोड ५६ लाख ८८ हजार ५ सय ६ पुगेको छ । यस्तै अमेरिकामा २ करोड ९६ लाख ५२ हजार ३८ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
त्यस्तै ब्राजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या ५ लाख ५५ हजार ५ सय १२ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १ करोड ९८ लाख ८० हजार २ सय ७३ पुगेको छ ।
श्रावण १६, २०७८ शनिवार १०:१२:४२ बजे : प्रकाशित
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने - 'नेपाल र भारत सुख–दुःखका साथी'
काठमाडौं - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारत सुख–दुःखका साथी भएको बताएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत मोदीले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपाल, भूटान, माल्दिभ्स सबै छिमेकी भएको बताउदै उनले सबैसँग सोच र सामाजिक चालचलन मिल्ने बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन् - 'भूटान होस्, नेपाल होस्, माल्दिभ्स होस्, मोरिसस होस्, हामी केवल छिमेकी मात्रै होइन, बरु हाम्रो सोच र सामाजिक चालचलनमा पनि धेरै समानता छ । हामी सबै सुख–दुःखका साथी हौं । जब, कुनै आपत आउँछ, विपत्ति आउँछ, तब सबैभन्दा पहिले हामीले एक अर्कालाई सहयोग गर्छौँ।'
श्रावण १६, २०७८ शनिवार १६:४५:२७ बजे : प्रकाशित
मलामी गएका व्यक्तिमाथि बम आक्रमण, ८ जनाको ज्यान गयो
बग्दाद - इराक राजधानी बगदादबाट उत्तरी क्षेत्रमा अतिवादी आइएसले मलामी गएका व्यक्तिमाथि बम आक्रमण गरेका छन् । ती इराकको उत्तरी क्षेत्र यात्रिब नगरको एक गाउँमा शुक्रबार राति उनीहरुले सो आक्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा आइएसले कम्तीमा आठ जनाको हत्या गरेको बताइएको छ ।
सो आक्रमणमा परेर अरु १० जना नराम्ररी घाइते भएका छन् । बम लागेर घाइते भएका उनीहरुलाई नजिकैको अस्पताल पु¥याइएको छ । उक्त नगरको अल्बु जिल्ली भन्ने स्थानमा आइएसले यसअघि पनि आक्रमण गरी कैयौँ गाउँलेको ज्यान लिएका थिए ।
उक्त गाउँको एक सुरक्षा जाँच चौकीमा पनि उनीहरुले हमला गर्दा केही व्यक्ति घाइते भएको पनि बताइएको छ ।सिन्ह्वा
श्रावण १६, २०७८ शनिवार २०:३३:२८ बजे : प्रकाशित
तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा अमेजनलाई ८८.६६ करोड डलर जरिवाना
ब्रसेल्स - अमेजन कम्पनीलाई युरोपेली सङ्घ ईयूको तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा ८८.६६ करोड अमेरिकी डलर जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तो जरिवाना लक्जेम्बर्गको तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आयोगले जारी गरेको हो ।
“कुनै तथ्याङ्कको दुरुपयोग भएको छैन र सेवाग्राहीका विवरण कुनै तेस्रो पक्षलाई दिइएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । “यी कुनै विवाद गर्न नपर्ने तथ्य हुन् ।” उहाँले आफ्नो कम्पनीले सीएनपीडीको निर्णयलाई बलियोसँग अस्वीकार गर्ने भन्दै त्यसको लागि पुनरावेदनमा जाने सोचेको बताउनुभयो ।एएफपी
श्रावण १७, २०७८ आइतवार ०६:३८:१४ बजे : प्रकाशित
भारतमा एकैदिन कोरोनाबाट ५ सय ४२ जनाले ज्यान गुमाए
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ५ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै हालसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ लाख २४ हजार ३८४ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ४१ हजार ७९० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ३ करोड १६ लाख ५४ हजार ५८४ पुगेको छ । यस्तै हालसम्म ३ करोड ८ लाख १२ हजार ८ सय ७३ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् ।
श्रावण १७, २०७८ आइतवार ०७:३९:३१ बजे : प्रकाशित